Edemede Robert Glazer na Martech Zone |
Edemede site na Ọnye na -bụ Robert Glazer?
Ọnye na -bụ Robert Glazer?
Monday, April 24, 2017 Tuesday, April 25, 2017 Ọnye na -bụ Robert Glazer?
Mgbakwunye ụlọ ọrụ nwere nsogbu. Enwere ọtụtụ egwuregwu, akwa, na akụkụ na-akpụ akpụ. Ọ bụ ezie na ụfọdụ nuances ndị a bụ ihe na-eme ka ụdị njikọta pụrụ iche ma baa uru, dị ka ijikọ ụgwọ na nsonaazụ, enwere ndị ọzọ na-anaghị achọsi ike. Ihe ọzọ bụ na, ọ bụrụ na ụlọ ọrụ amaghị banyere ha, ha nwere ike ibibi ụdị ha. Maka ụlọ ọrụ iji ohere ahụ zuru oke wee laghachi na ntinye ego na mmemme mgbakwunye nwere ike